१० महिनाको शिशुको विकास र आहारको बारेमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू:: Naya Nepal
१० महिनाको शिशुको विकास र आहारको बारेमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
यदि तपाईंको बच्चा १० महिनाको भयो भने बचाको स्वास्थ्यलाई कसरी ख्याल गर्ने ? के खान दिने र उसको खानामा कस्तो तालिका बनाउने ? यो कुरा महत्वपूर्ण हुने गर्छ । १० महिनाको समय यस्तो समय हो त्त्यो बेलादेखि नै बच्चाले हरेक काममा आत्मनिर्भरताको बाटो अपनाउन खोज्छ । यही समयमा नै बच्चाको शान्त, मृदुभाषी र जोखिम उठाउन सक्ने कस्तो स्वभाव छ ? भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ । यही १० महिनो शिशुको विकास र आहारसँग जोडिएको विषयलाई तल उल्लेख गरिएको छ ।
१० महिनाको शिशुको वजन र उचाइ कति हुनु ठीक ?
कुनै पनि बच्चाको शरीर सन्तुलित गतिमा विकास भइरहेको छ कि छैन ? भन्ने बारेमा पत्ता लगाउनको लागि समयसमयमा बच्चाको उचाइ र तौल आदिको बारेमा नाप लिइरहनुपर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले जन्मदेखि २ वर्षसम्मको उमेरसम्मको बच्चाको वजन र उसको लम्बाइ कति हुनुपर्छ ? भनेर एउटा औसत चार्ट समेत तयार पारेको छ । यसको अनुसार यदि १० महिनाको शिशु केटा ५ भने ९.८ किलो र केटि भएमा ९ किलोको हुनुपर्छ । शिशुको उचाइको कुरा गर्दा १० महिनाको केटा शिशु भए उसको उचाई ७३ सेन्टिमिटर र यदि छोरी भए ७१.५ सेन्टिमिटरको आसपास हुने गर्छ । यो लम्बाइ र तौल औषत हो । यसमा थोरै तलमाथि हुँदा चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कुरा रहँदैन ।
१० महिनाको शिशुको गतिविधि
१० महिना पुगेको बच्चा आफ्नो हात र घुँडाको सहाराले हिँडडुल गर्ने गर्छ । हात र खुट्टाको सहाराले नै पूरै घरको परिक्रमा गर्ने गर्छ । केही केही बच्चाहरू त्यसभन्दा भिन्न पनि हुन्छन् । त्यस्तो हुँदा पनि चिन्ता लिनु भने पर्दैन । किनकि कोही कोही बच्चा एकै पटक खुट्टाको सहाराले हिँड्ने खालको पनि हुन्छ ।
आफ्नो सानो हातको मुट्ठीमा सानो सानो वस्तु लिने ती बच्चाहरूले यो समयमा सर्पलाई समाते भने पनि मारेर छाड्छन् भन्ने नेपाली मान्यता छ । १० महिनाको शिशुमा निम्नलिखित शारीरिक विकास हुने गर्छ ।
–कसैको सहाराविना नै बस्ने गर्नु
–सिधा उभिएर बस्नु
–जमिनमा बसेको पोजिसनमा कुनै पनि चिज या फर्निचरलाई समातेर सिधा उभिनु
–कसैको सहाराविना नै सिधा उभिनु
–केही कदम अघि बढ्नु या सिँढी चढ्नु
–जसले आफूलाई बोलाउँछ । उसैको तिर पुग्नु ।
–हात हल्लाएर बाइबाइ गर्नु आदि ।
१० महिने शिशुमा हुने मस्तिष्कको विकास
–१० महिनाको शिशुले रंगलाई राम्रो तरिकाले देख्न र सम्झिन सक्छ ।
–कुनै पनि स्वाद वा वस्तु हेरेर आफूलाई मन पर्ने वा नपर्ने पहिचान गर्न सक्छ ।
–१० महिनाको शिशु जिज्ञासु हुने गर्छ । उसले कुन वस्तुले कस्तो काम गर्छ भनेर पत्ता लगाउन खोज्छ ।
–१० महिनाको शिशुमा नै आफू एक्लो हुन्छु कि भन्ने चिन्ताको समेत विकास हुन्छ ।
–बच्चाको भविष्यको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने पनि यही समयमा अनुमान गर्न सकिन्छ ।
–यो समयमा बच्चाले केही केही शब्दलाई बुझ्ने र सम्झने गर्छ ।
–यो समयको बच्चालाई संगीतप्रति धेरै रुचि हुन्छ । संगीत सुनेर आफैंमा झुम्न थाल्छ ।
१० महिनाको बच्चामा सञ्चारको विकास
१० महिनाको बच्चाले अरुले गरेको कामको नक्कल गर्न सक्छ । तपाईंले भनेको कुरा र भनेको शैलीलाई यो उमेरको मान्छेले जस्ताको त्यस्तै टिप्ने गर्छ । उदाहरणको लागि यदि तपाईं कुनै उदास फिल्म हेरेर रोइरहनु भएको छ भने बच्चाको अनुहार पनि उदास हुन्छ ।
–यदि हामीले हात उठाएर बाइबाइ ग¥यौं भने उसले पनि सोही शैलीमा बाइबाइ गर्छ ।
–१० महिनाको शिशु स्वयंलाई आफ्नो नामबाट बोलाउँदा उसले प्रतिक्रिया पनि दिने गर्छ ।
१० महिनाको बच्चालाई के खुवाउने ?
हरेक गतिविधिको विकास भइरहेको अवस्था हुनाले यो समयमा हामीले बच्चालाई पौष्टिक आहार खुवाउनुपर्छ । यो उमेरको बच्चालाई जेसुकै खानेकुरा पनि सकेसम्म आफ्नै हातले खाने बानीको विकास गराउनुपर्छ । निम्न खानेकुरा १० महिनाको बच्चाको लागि उपयुक्त हुन्छ ।
–अमिलो फलहरूलाई छाडेर सबै किसिमको फल
–सबै किसिमको मौसमी तरकारीहरू
–विभिन्न किसिमका दलहनको परिकार
–गाईको दूध छाडेर सबै किसिमका दुग्धजन्य पदार्थहरू
–यदि तपाईं मांसाहारी हो भने नरम मासु र थोरै माछा पनि नरम बनाएर खुवाउन सकिन्छ ।
–यदि सकिन्छ भने बच्चाको खानामा बेसार, हिङ, जिरा, मेथी जस्ता खानेकुरा पनि राख्न सकिन्छ ।
१० महिनाको बच्चालाई कति घण्टा सुत्न लगाउने ?
अधिकांश १० महिनाको बच्चाको लागि १४ घण्टाको निद्रा पर्याप्त हुन्छ । तर यदि केही बच्चा १२ देखि १६ घण्टासम्म पनि सुत्न सक्छ । १० महिनाको बच्चाले एक पटक पनि दूध नपिई १२ घण्टासम्म निरन्तर सुत्न सक्छ ।
लागत मूल्य नपाउँदा थलिँदै पोल्ट्री व्यवसाय
काठमाडौं । बजारमा मासुको खपत घटेसँगै उत्पादनले लागत मूल्य नपाउँदा पोल्ट्री व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । लामो समयको बन्दाबन्दीको प्रभावका कारण हालसम्म मासुको खपत बढ्न नसक्दा पोल्ट्री व्यवसायीहरू उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा चल्ला तथा तयारी कुखुरा बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन् ।
मासुको खपत घटेपछि व्यवसायीहरूले प्रतिकिलो १ सय ८० रुपैयाँ लागत पर्ने जिउँदो बोइलर कुखुरा प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँमा मात्र बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्नुका साथै होटल, रेस्टुराँ तथा पार्टीप्यालेसहरू निर्वाध खुल्न नसक्दा मासुको खपत घटेको छ । उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा कुखुरा विक्री गर्नु परेपछि कुखुरापालक किसानहरू लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा घाटामा रहेको विष्ट बताउँछन् ।
बन्दाबन्दी सुरु भएयता चल्ला बिक्री नभएर निरन्तर रुपमा मारमा परेका ह्याचरी व्यवसायीको समस्या पनि अहिलेसम्म सुध्रिन सकेको छैन । बन्दाबन्दीको सुरुआती चरणमा दैनिक ६ लाख चल्ला नष्ट गर्नु परेका कारण घाटामा रहेका ह्याचरी उद्योगहरू एक महिनादेखि उत्पादन लागतभन्दा निकै कम मूल्यमा चल्ना बेच्न बाध्य छन् । नयाँ उत्पादित चल्लाको माग घट्न गई ५६ रुपैयाँ ४५ पैसा लागत लागेकामा २० रुपैयाँमा पनि बिक्री हुन नसकेको नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले बताए ।
‘नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएयता निरन्तरको घाटा सहन नसकेर अहिलेसम्म ४४ वटा ह्याचरी उद्योग बन्द भएका छन्’, पोखरेलले भने । नेपालका कुल ३ सय २४ ह्याचरीमध्ये हाल २ सय ८० ह्याचरी मात्र सञ्चालनमा छन् । सामान्य अवस्थामा देशभर दैनिक ५ लाख किलो मासु खपत हुने गरेकामा अहिले यो परिमाण १ लाख ५० हजार किलोमा झरेको छ । अहिले कुखुराको मासुको मूल्य प्रतिकिलो २ सय ५५ रुपैयाँ छ ।